Isticmaalka Taleefanka casriga ah: Xagee dadku ku isticmaalaan taleefannada casriga ah
Jimco, Oktoobar 7, 2011 Axad, Oktoobar 4, 2015 Adam Yar
Tatango, oo ah shirkad Suuqgeyn SMS ah, ayaa la soo baxday macluumaad kale oo fudud oo si dhib yar u daaha ka qaadaya sida taleefannada casriga ahi nolosheenna iyo howlaheenna u dhex galeen. Waxaan jeclaan lahaa in tiyaatarada filimku ay rakibi doonaan aalado xakameynaya calaamadaha oo ka dhigaya taleefanka gacanta oo aan waxtar lahayn tiyaatarka filimka. Gaariga ku daa dadyahow! Dhab ahaan!
Maxay kula tahay Telefoonada casriga ah nolosheena ma fududeynayaan? Mise waxay inaga mashquulinayaan nolosha guud ahaan?
Liiska Hubinta emaylka: 13 Talaabooyin Kahor Intaadan Gujin Guji!
Oktoobar 8, 2011 at 7:30 AM
Boqolleydee maxay ka timid? Ma helin tirakoobka
Oktoobar 8, 2011 at 3:00 PM
Waxay ahayd baaritaan lagu sameeyay dadka isticmaala taleefannada casriga ah in shirkad, Prosper, ay fuliso bishii Sebtember 2011.